Isikhokelo sentengiso se-B2B kwiZiphumo zokuThengiswa kweDrive | Martech Zone
Isikhokelo seNtengiso ye-B2B kwiZiphumo zeNtengiso zeDrive
NgoLwesibini, Februwari 25, 2014 NgoMvulo, Februwari 24, 2014 Douglas Karr
Le infographic evela Ukungenisa wenza umsebenzi olungileyo ekwaphulweni kwamaqhinga kwiitshaneli zeshishini ukuya kwishishini (B2B) kwimizamo yokuthengisa eqhuba iziphumo zentengiso. Andiqinisekanga ukuba ingcebiso apha kufuneka yamkelwe ngokwenyani ngumbutho wonke we-B2B, kodwa ikunika iinkcazo ezintle malunga nokuba amajelo angayinceda njani imizamo yakho yokuthengisa.
Obu butyebi benzelwe ukukunceda uqonde intengiso ye-B2B kunye nomhlaba wentengiso ukuze uchonge izicwangciso ezifanelekileyo kunye namaqhinga ombutho wakho. Emva kohlalutyo olucokisekileyo kunye namava eminyaka kwintengiso ye-B2B, sijonge ukusebenza kwayo yonke into ukusuka kwi-Twitter ukuya kwiifowuni ezibandayo.
Ukungenisa liqonga lokuthengisa eluntwini elinemephu zonxibelelwano phakathi kweenkampani kunye nabathengi kunye nethemba.
tags: b2bngenisaSocial Media Marketingukuthengisa kwezentlalo
Ukungenisa ngaphakathi: Cwangcisa, uthengise kwaye ugcine ngokuThengisa kwezeNtlalo
I-Feedbagbag.io: Isixhobo esiDibeneyo sokuSebenza sokuDibanisa